China imaski yemishini yokwenza imishini abenzi bendlebe iluphu yobuso bemaskhi abakhiqizi befektri abakhiqizi I-Haojing
Flat imaskhi umshini
N95 imaski ukwenza umshini
Earband Welding umshini
Imaski ukusika umshini
Imaski onqenqemeni umshini nisishiye siboshwé ngebhande
KF94 imaskhi umshini
Cup imaskhi umshini
99 Shangyu Road, Xinbang Town, Songjiang District, eShanghai
Khuluma noHaoJing + 86 18652005139
onqenqemeni ikhanda wayibhinca imaskhi abakhiqizi umshini S ...
Incazelo yevidiyo yomkhiqizo Iqhathaniswa ...
China n95 imaski ukwenza umshini ubuso buso indlebe iluphu wel ...
Incazelo yevidiyo yomkhiqizo Lokhu kugcwele ...
OEM Manual imaski Machine flat imaskhi ukukhiqizwa umshini ...
Incazelo yevidiyo yomkhiqizo Ifulethi ...
China Servo imaski Machine Supplier Flat Face Vuvu Mac ...
Izici zevidiyo yomkhiqizo 1.Le machi ...
imaski yesandla abenzi bomshini indlebe iluphu yobuso imaskhi abenzi bemishini
1. Isetshenziselwa amabhande endlebe wokushisela amaski ahlukahlukene.
2. Isikhala esishintshekayo ukukunikeza uhla olufanele lokukhetha.
3. Ukondla okwenziwa ngesandla, ukusika okuzenzakalelayo, ukushisela okuzenzakalelayo, ukusebenza kokudla okuzenzakalelayo kuphephile futhi kulula.
4. Ibhande lezindlebe le-mask butterfly lingafakwa nge-othomathikhi, futhi indawo yokuma ingashintshwa ngokushesha ukuze ivumelane nokukhiqizwa kwamamaski ahlukahlukene.
Lona ngumshini wokuwelda wezindlebe osetshenziswayo ongakwazi ukugoqa amabhande endlebe ohlangothini olulodwa lwesifihla ngasikhathi. Ukuma kwekhanda lokushisela kungashintshwa ngokuya ngohlobo lwemaski yekhasimende. Ifanele amasiki ayisicaba, ama-N95 masks, amamaski endebe, namaski weduckbill.
Imishini ifakwe inkinobho yokuma okuphuthumayo. Lapho okokusebenza kwehluleka, kungamiswa ngokuphuthumayo ukuqinisekisa ukuphepha kwemishini nabasebenza kuyo.
I-ultrasonic esetshenziswa emshinini we-earband welding wumkhiqizo owaziwayo wasekhaya, ongaqinisekisa ukuthi izindawo zokushisela zezintambo zezindlebe zemaski zinhle futhi ngeke kube khona ukwehluleka kwe-welding.
Izingxenye zemishini zisebenzisa izinhlobo ezaziwayo, njengeSchneider, i-Nokia ne-AirTAC njalonjalo. Singakwazi ukwenza ngezifiso imishini ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngaphambi kokuthi imishini ithunyelwe, sizokwenza imishanguzo yokulwa nokugqwala kwemishini, futhi sithathe ividiyo yokusebenza, futhi sinikeze nezinkinga zemishini ejwayelekile nezixazululo zokuqinisekisa ukuthi amakhasimende angayisebenzisa imishini ngokujwayelekile.
Ingasetshenziselwa ukungashiseli amabhande endlebe ngamamaski ama-N95, kepha futhi nokushisela amabhande endlebe obuso obusicaba.
Ukucindezela kwamaphoyinti amabili kanyekanye nokushisela amabhande endlebe emaskhi
Izingxenye ezibalulekile zemishini, esetshenziselwa ikakhulukazi ukuwelda
Indlela yentambo yendlebe
Umshini wentambo yezindlebe ungalungisa ukuqina kwentambo yendlebe ukusiza ukulungisa iphutha
Langaphambilini china n95 imaski yokwenza umshini ubuso buso indlebe loop umshini wokushisela umshini okuzenzakalelayo wendlebe ibhendi umshini wokuwelda
Olandelayo: umshini wokukhiqiza imaski oyisicaba umshini we-earloop umhlinzeki womshini we-earloop umshini wobuso
China okuzenzakalelayo Flat imaski Machine
Umshini we-China Flat Mask
Umshini we-China Mask Ear Loop Welding
China N95 imaski Ukwenza Machine
China Ultrasonic Imaski Ukwenza Machine
Indlebe I-Loop Face Mask Machine Abakhiqizi
Indlebe I-Loop Welding Machine Face Mask
Umhlinzeki Womshini We-Earloop Mask
I-Earloop Welding Machine Mask
Abenzi Bomshini Wokushisela I-Edge Head Strap Mask
Ama-Edge Head Strap Mask Welding Machine Quotes
Ubuso Buso Mask Indlebe Loop zokushisela Machine
Abenzi Bomshini Wobuso Bomsiki Wendlebe Wokushisela
Flat Face imaski Machine Factory
Flat imaski Machine
Flat imaski Machine Factory
Abakhiqizi Bomshini We-Flat Mask
Abahlinzeki Bomshini WamaFlat
Flat imaskhi Imishini
Ukukhiqizwa Kwe-Flat Mask
Flat imaskhi Production Machine
Imaski Indlebe I-Loop Welding Machine Manufacturers
Imaski Earloop zokushisela Machine
Ultrasonic Mask Ukwenza Abahlinzeki Bomshini
China n95 imaski ukwenza umshini ubuso imaski indlebe loo ...
imaskhi flat ukukhiqizwa umshini earloop imaski machi ...